Qatar oo lagu xaglinayo Taageeridda Dadka la doon doonayo oo ay Soomaali kamid yihiin. – Hornafrik Media Network
Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ayaa markaan fursat kale oo ay Qatar ugu xaglin karaan in ay taageerto ugu dhigaya Xubno gaaraya 40 qof, horayna ugu tirsanaa Al-Shabaab iyo Kooxo ka dagaalama Yemen oo dalkeeda kunool.
Wargeyska Almasryalyoum ee kasoo baxa ee Masar kasoo baxo oo wareystay Siyaasiyiin Reer galbeed iyo Carab isugu jira ayaa daabacay in suurto gal tahay in wadamada ku eedeenaha in Xukuumadda Doha ay taageerto argagixisada ay u cuksadaan xubnahaasi dalkeeda kunool.
John Rutherford waxa uu kamid yahay Siyaasiyiinta Mareykanka waxa uu qabaa in Qatar lagu eedeen karo dad kasoo muuqday liiska xubno uu mareykanka doon doonayo oo ay Magan galyo siisay.
Dr. Cali Raashid Al-Naciimi oo ah Tifaftiraha Shabakada Al Ain ayaa isna qaba in Doodda la xiriirta Qatar iyo Argagixisada aanan meel fog ka dooni doonin isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka.
Waxa uu bidhaamiyey in qatar ay ku nool yihiin waqti fog dad lagu tiro ama lagu daray Liiska Argagixisada, taasine waxay noqon doontaa jawaab furan oo ay Miiska Soo dhigaan xubnaha lasoo shaqeeyey Al-Shabaab oo Soomaaliya ka dagaalanta, Jabhadda Al-Nusra oo Siiriya ka dagaalanta, Daacish iyo Garabka Al-Qaacida ee Yemen ka dagaalama.
Sidoo kale waxaa kunool Xubno katirsan Kooxda Ikhwaanul Muslimiin ee laga Mamnuucay Masar, waa Todobaatan-meeyo, Waa Sideetan-meeyo ama Waa Shagaan-meeyo, Dhamaantood waa Aas-aasayaal Ururo Argagixiso ayuu yiri Al-Naciimi.
Dowladda Qatar ayaa magan galyo siisay Xubno katirsanaa Al-Shabaab, qaarkood ayaa ugu jiray Liiska Argagixisada, waqtiyo kala fog ayeyna tageen dalkaasi oo ay iminka kunool yihiin.
Dowladaha go’doomiyey Qatar ayaa Xukuumadda Doha ku eedeeyey in ay taageerto waxa ay ugu yeereen Argagixisada, inkastoo ay iyane iska fogeysay eedaha loo jeediyey.
Maamulka Gobolka Kitui ee Kenya oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Somalida
Sawirro:- Shiinaha oo dib usoo celinaya Nalalka Samaan-faraha ee Wadooyinka Muqdisho.